Getafe Negro Mutambo 2016. Yechipfumbamwe edition. | Zvazvino Zvinyorwa
Getafe Negro Mutambo 2016. Yechipfumbamwe edition
Kubva muna Gumiguru 14 kusvika 23, yechipfumbamwe edition yeMadrid Police Novel Festival ichaitika yakarongedzwa neGetafe City Council. Iri dhorobha riri kumaodzanyemba kwenharaunda yeMadrid rave kutoita benchmark dzimbahwe reimwe yezviitiko zvakakosha zvekunyora pachiitiko chetsika. Kumberi, muchengeti wayo, munyori Lorenzo Silva, zvakare zvakare inounza pamwechete akanakisa emunyika uye epasi rose mhando dema. Asi zvichave zvakawanda vamwe vatinoshanda navo, vagadziri vemafirimu, vatori venhau, vanyori vezvinyorwa, vapepeti kana mabloggi vanozouya pamwechete kuzokurukura zvirikuitika, nhau uye mafambiro matsva mumhando iyi.
Gore rino ndi Argentina nyika yevaenzi uye ichakudzwa zvakare nhamba de ndiani angangoita seanowirirana anoonekwa seanotungamira mhando yacho: Edgar Allan Poe. Sechikamu chakakurumbira chechirongwa, mutambi uye director director theatre Jose María Pou achaverenga zvakaenzanisirwa zvinyorwa nemunyori wekuAmerica asingafi. Asi pane zvimwe zvakawanda ...
Misoro uye zviitiko
Semusoro wedemo wezvirongwa, gore rino isu tichataura nezvazvo tsika yekushungurudzwa munharaunda yanhasi. Zvakare, zvine musoro, mutafura yakatenderera mufananidzo we Cervantes yakaburitswa, Saka zvinotsanangurwa kuti zvibvise kubva pakuona zvakanyanya "zviri pamutemo". Iko kutarisisa kuchave pane kwake mamwe akawanda akajairika kana mashoma ezvematongerwo enyika akajeka mativi emunyori waDon Quixote.
Dingindira rechitatu rinenge riri iro vapoteri, uko kuchatariswa kumeso kwemhosva kwakanyanya kwedambudziko iri: kutengeswa kwevanhu, hupenzi hwehurumende kana kuwedzera kwe xenophobia. Uye pakupedzisira ivo vachataura nezvazvo ideology munhau yekuparwa kwemhosva, miganho yaro kana kuti ingafurire sei pakugadzira.
Pakati pezviitiko pachave nekuratidzira uye kusaina mabhuku, mashopu, misangano, mumhanzi, cinema, theatre kana makwikwi. Zvese munzvimbo dzakasiyana siyana kuGetafe neMadrid.
Sezvo gore rega rega chakakodzera chimiro chemhando yacho chinovhura mutambo uye nguva ino ichave iri yekuScotland munyori Ian Rankin. Baba vemuongorori John Rebus, mumwe mukuru ane nhevedzano refu, Rankin achangobva kuSpain mushure mekuhwina X RBA Noir Novel Award yezita rekupedzisira nemupurisa wake ane mukurumbira.
Chimwezve chazvino chinoitika munyori weNordic dema zvinyorwa achapawo bhuku. Izvo ndezveNorway Samuel Bjork iyo, neyake Ndinofamba ndega uye ikozvino nyowani Zizi, anovimbisa imwe nhepfenyuro yakanaka yevanopokana vaviri vevatikitivha.
Ehe saizvozvo, pachave nevashoma vanyori vevanyori veArgentina yechimiro chaCarlos Salem kana Ernesto Mallo. Uye pachave nemakakatanwa anonakidza semuenzaniso iwoyo emaBritish Lindsay Davis ane chiremera chenyika munhoroondo yenhoroondo iyo iri Santiago Posteguillo. Kugona kufungidzira hound yeRoma Marco Didio Falco kurwira muHispania naSpipio kana muParthia naTrajan chiitiko chakati.
Mumwe muArgentina, Jorge Fernández Díaz, naArturo Pérez-Reverte vachataurawo nezvemabasa avo. Ngatiyeukei kuti Pérez-Reverte anongopa bhuku idzva, Falco, iri kutengeswa zuva rinotevera 19, mumutambo uzere. Uye vamwe vaviri vakaroorana vachatarisana chiso nechiso ndiDomingo Villar naIgnacio del Valle. Kubva kumazambiringa ekuchamhembe makumi manomwe neshanu, vanyori vaviri ava vari pakati pevakaverengwa zvakanyanya uye vanokosheswa nevanoongorora.
Kubva kuna Ignacio del Valle ndave ndakamirira kusangana nasabhuku wake Arturo Andrade. Nekudaro, Inspector Leo Caldas deDomingo Villar ane diki diki rakatanhamara mumoyo mangu. Uye zvakare, nyaya dzavo, zviitiko uye zviitiko zvinoitika munzvimbo dzandinonyatsoziva, senge Vigo, chiteshi chayo uye zvakapoteredza. Saka kuiverenga kunakidzwa kwakapetwa uye ini ndinoikurudzira kune wese munhu, kunyanya kana, seni, uchinzwa kushaya simba Pola terra galega.
Kutenderedza kuratidzira kwemazita emunyika anoyevedza, ivo vanofambawo Víctor del Arbol, Toni Hill, Empar Fernández, Pere Cervantes naClara Peñalver, iyo inozofunga nezve shanduko yemhando nhasi.
Zvisinei, iyo poster iri yakanaka chaizvo. Izvo zvichave zvakakodzera kushanyira kunyangwe zuva rimwe chete kuburikidza neinonyanya kuvira uye nhema Getafe. Tichaona mafambiro azvinoita, asi handina mubvunzo kuti ichave budiriro zvakare.
Kuti ubvunze zvakadzama chirongwa uye zviitiko zvakasiyana, unogona kuwana yepamutemo webhusaiti yemutambo: Getafe Nhema.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zviitiko » Getafe Negro Mutambo 2016. Yechipfumbamwe edition
Zuva ripi !!! Getafe inounza isu vanyori vari pane yangu yekunyora Olympus. Kubva kuMuti, Villar, iyo inoshamisa Bjork ... uye pamusoro payo ndinoyemura Posteguillo, Ndatenda zvikuru Mariola, waita muromo wangu mvura.